waxaa qoray: Max Csern Maajo 9, 2021
Sidee loo go'aamiyaa meesha ugu wanaagsan ee lagu noolaado meeraha Dunida? - waayo-aragnimadayda gaarka ah, aniga oo kaashanaya jawaab celin ka timid cosmopolitans kale iyo ururo takhasus leh.
Sannad walba kumanaan kun ayaa u qulqula dalal kale iyagoo raadinaya nolol ka wanaagsan tan ay ku noolyihiin. Tan waxaa u sabab ah rabitaanka ah in la kordhiyo wanaaggooda iyo in carruurta la siiyo mustaqbal sharaf leh. Mararka qaar sababtu waxay ku jirtaa damaca guud ee soogalootiga ee doorta dal gaar ah iyadoo lagu saleynayo dookhooda iyo dookhooda. Iyo, dabcan, sababaha ugu caamsan waa guurka rasmiga ah, waxbarashada iyo shaqada. Sidee loo go'aamiyaa meesha ugu fiican ee lagu noolaado Dhulka? - waayo-aragnimadayda gaarka ah, anigoo kaashanaya jawaab-celin ka timid cosmopolitans kale iyo ururo takhasus leh.
Shirkadda la-talinta ee Resonanse Consultancy ayaa soo bandhigtay cilmi baaris iyo qiimeyn falanqeyn ah oo ay u soo bandhigtay guud ahaan bulshada magaalooyinka ugu fiican ee lagu noolaado sanadkii 2021. Liiska waxaa ku jira kuwa la magacaabay oo leh nolol raaxo leh iyo xaalado shaqo.
Shuruudaha xulashada ee megacyada ugu soo jiidashada badan nolosha waxaa ka mid ahaa qodobbada soo socda:
Goob juquraafi ahaan iyo xaaladda cudurrada faafa (xaaladaha cimilada, amniga, tirada dadka qaba coronavirus).
Maskaxda dadka deegaanka: caadooyinka, aragtida laga qabo soo galootiga, iyo sidoo kale tirada dadka aqoonta jaamacadeed leh.
Joogitaanka kaabayaal horumarsan (matxafyo, tiyaatarro, garoomo, jaamacado, iwm).
Heerarka nolosha: shaqo la'aanta, dakhliga dadweynaha, waxsoosaarka guud ee magaalooyinka (wax soo saarka guud ee magaalooyinka).
Fursadaha dhaqanka iyo madadaalada: maqaayadaha, makhaayadaha, goobaha lagu caweeyo, iwm.
Inta jeer ee raadinta makiinadaha raadinta, dib u eegista safarka iyo hashtags ee shabakadaha bulshada.
Kuwa ugu caansan, oo qaatay seddexdii meelood ee ugu horreysay ee sharafta, waxay ahaayeen UK - London, USA - New York iyo France - Paris. Tobanka ugu sarreysa waxaa ku jira megalopolise-yada Yurub, Aasiya iyo Mareykanka.
10ka ugu sareeya Resonanse Consultancy:
London, Ingiriiska). "Foggy Albion" wuxuu hayay jagooyin hogaamineed oo darajo ah 6 sano oo xiriir ah: magaalada ugu fiican ee lagu noolaado. London waxay ku jirtaa booska 16-aad ee joogitaanka aagagga cagaaran ee madadaalada: jardiinooyin si qurux badan u dhisan, deegaanadii ugaadhsiga hore ee boqortooyada, iwm. Cudurka faafa ee 'Covid epidemic' wuxuu isbadal ku sameeyay qaabkii hore ee magaalo weyn: dadka degan waxay bilaabeen inay qiimeeyaan wax badan oo ay haystaan. Laakiin sida ay doontaba ha noqotee, farqiga u dhexeeya taajiriinta iyo faqiirka ayaa si ba'an u sii kordhaya.
New York, USA). Mid ka mid ah meelaha ugu waaweyn magaalooyinka adduunka ku yaal xeebta Atlantic. Magaalada dhismayaasha dhaadheer iyo muuqaalka ruuxda xorriyadda ee Mareykanka. Meel ay jeceshahay dalxiisayaal badan iyo ajaanib ka kala timid meeraha oo dhan - "Riyada Mareykanka" dhab ahaan. Bulshada Ruushka, oo halkaan degtay tan iyo 70-meeyadii qarnigii la soo dhaafay isla markaana horseed u ah hab firfircoon oo nolosha bulshada ah, ayaa sanad walba lagu buuxiyaa dadka cusub ee deggenaanshaha rasmiga ah. In kasta oo xaaladda faafa ee hadda aan fiicnayn ee Ameerika, heerka nolosha uu weli sarreeyo. Sida laga soo xigtay qiyaasaha, bishii Maarso 2021, celceliska mushaarka Mareykanka wuxuu ku dhowaad ahaa $ 5000 (qiyaastii 300000 rubles).
Paris, Faransiiska). Si loo sooceliyo weedha caanka ah: "Fiiri Paris oo dhinta", dalxiisayaal badan ayaa si kalsooni leh u leh: "Fiiri oo joog." Weeraradii argagixiso ma jabin caasimada Faransiiska: way soo kabatay wayna ku barwaaqowday kuna sii sugnaatay dad badan magaalada ugu fiican ee lagu noolaado. Paris ayaa kaalinta 5-aad kaga jirtay tirada madxafyada iyo kaalinta 7-aad ee goobaha cibaadada ee dalxiiska. Ayadoo ay fasax ka haystaan ​​masuuliyiinta inay ku dabaalanayaan Seine, Parisians-ka laftoodu ma doonayaan inay ka baxaan Paris xagaaga.
Moosko, Ruushka). Caasimada Russia waa quud dhadhan fiican oo shisheeyaha. Aad ayey ugu qanacsan yihiin heerka nolosha iyo mushaharkaba. Waxay si fudud u helaan isgaarsiinta waxaana laga aqbalaa bulshada Ruushka. Moscow waa caasimad caalami ah, oo leh kaabayaal horumarsan, goobo qurxoon oo lagu madadaasho, taariikh qadiim ah iyo soojiidasho badan. Shisheeye badan, iyada magaalada ugu fiican adduunka. Horyaalka kubada cagta ee 2018 ayaa ka yaabiyay adduunka oo dhan miisaankiisa iyo dabeecaddiisa xiisaha leh, wuxuu u furay Ruushka gebi ahaanba ka duwan degganeyaasha dalal badan wuxuuna kordhiyay xiisaha ay u qabaan dhaqanka waddanka. Sidoo kale, tareenka dhulka hoostiisa la dayactiray kama farxin karo - sharaf gudaha ah oo si fudud ula tartami karta metro galbeedka.
Tokyo, Japan). Magaalada weyn ee mustaqbalka, inkasta oo masiibooyinka dabiiciga ah ee soo noqnoqda ay ka dhacaan, waxaa loo arkaa mid ka mid ah kuwa ugu nabdoon. Tokyo waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad ee safka adduunka ee magaalooyinka barwaaqada: 11aad ee tirada dadka shaqo la'aanta ah, aasaaska qalinka ee xarunta Global 500, iyo 2aad ee helitaanka maqaayadaha. Tokyo waxay la dhacsantahay cunnadeeda iyo dhaqankeeda.
Dubai, UAE). Raaxo Carab ah oo dhex taal ciidda dahabka ah iyo Gacanka Beershiya ee Badweynta Hindiya. Xarunta Ganacsiga iyo Dalxiiska Caalamiga - Dubai. Magaalo ay dhaqammada barigu si dhow isugu dhexgashaan astaamaha casriga ah. Maaddaama uu faafay coronavirus-ka, qulqulka dalxiisyadu aad buu u yaraaday. Xaqiiqadani waxay saameyn ku yeelatay dhaqaalaha dalka, laakiin si xun uma noqon. Dubai waxay sii ahaaneysaa tan ugu badan meesha ugu fiican ee lagu noolaado muhaajiriinta badan.
Singapore. Jasiiradda Aasiya ee gobolka-megalopolis waxay ku guuleysatay guul aad u weyn muddo 50 sano ah - laga bilaabo dhaqaale ahaan liidata iyo polis aan horumarin lahayn, waxay isu rogtay quwad bari ah. Waxay caan ku tahay garoonkeeda naqshadeeye iyo, dabcan, Roob Whirlwind, biyo-dhaca gudaha ee adduunka ugu dheer.
Barcelona, ​​Spain). Dhismaha, hal abuurka iyo xeebta caasimada Catalan waa soojiidashada dalxiisayaasha maadaama waqtiyada masiibada ay kujiraan wakhtiyo adag. Baarar badan, oo ku xirmay xeebta badan dartiis martida soo booqata awgeed, weligood ma furi karaan.
Los Angeles, USA). Dalxiiska iyo Magaalada Cunnada ee Malaa'igta ayaa si tartiib tartiib ah u bilaabay inuu ku soo noqdo maskaxdiisa ka dib Covid-19, laakiin tani kama hor istaageyso inay sii ahaato mid ka mid ah megacyada ugu fiican adduunka.
Madrid, Spain). Caasimadda Isbaanishka waa ku cusub tobanka ugu sarreeya, laakiin muddo dheer bay ahayd wax loo arko dalxiisayaasha. Dhaqaalaha raasumaalku waa mid horumarsan mana joojinayo ku dadaalka horumarka. Magaaladu waxay leedahay jawi cajaa’ib leh oo xagga caafimaadka ah, oo had iyo goorba hawo wanaagsan, taas oo war wanaagsan u ah booqdayaasha. Nolosha habeenku way soo kabanaysaa kadib faafida (kaalinta 6aad ee qiimeynta madadaalada), qorshaynta magaalooyinka ayaa sii socota inay horumariso.
Soo dhaweynta iyo aragtida laga qabo soogalootiga
Aaway meesha ugu fiican ee lagu noolaado dalxiisayaasha iyo kuwa doonaya inay si joogto ah u joogaan? Wadamo badan, waxay muujiyaan dabeecad saaxiibtinimo oo ku wajahan martida iyo imaanshaha deganaansho rasmi ah. Faafida ka hor, magaalooyinkan waxaa ka mid ahaa: Alicante, Malaga, Lisbon, Valencia, Buenos Aires iyo kuwo kale. Kuwa ugu daacadsan sida ku cad qiimeynta Expat Insider ee 2020 waa Jasiiradda Iberian.
Isbaanishka Alicante iyo Boortaqiiska Lisbon waa saaxiibtinimo aad u wanaagsan: dadka soo booqda waxay ku qanacsan yihiin heerka nolosha, madadaalada dhaqanka iyo awooda ay dhaqso ugu bartaan luuqada.
U guurista waddan kale mararka qaarkood aad ayey u adag tahay: mas'uuliyiinta waddammada ayaa si adag ula dhaqma kuwa u safraya adduunka oo dhan iyagoo raadinaya magaalooyinka ugu fiican ee lagu noolaado. Badanaa waa lagama maarmaan in la helo sababo wanaagsan oo loo guuro: guur rasmi ah, shaqo ama joogitaanka raasamaal aad u fiican.
Fursadaha lagu helo rukhsad degenaansho ama muwaadin lagu noqdo ayaa ku sii kordhaya maalgashadayaasha. Si ay uga qaybqaataan barnaamijka maalgashiga lacageed, waxay ku darsadaan qadar cayiman horumarka dhaqaalaha ee gobolka ay degi doonaan. Shisheeyaha soo haajiray waxay furi karaan ganacsi, iibsan karaan guri / guri ama deebaaji gelin karaan.
Barnaamijyada maalgashiga waxay si firfircoon uga shaqeynayaan Spain, Portugal, Greece. Ameerika sidoo kale waxay ku faraxsan tahay inay hoy siiso muwaadiniinta dalal kale oo dhaqaale ahaan sugaya oo diyaar u ah inay maalgashadaan. Codsadaha la shaaciyay ee deganaanshaha wuxuu u guuri karaa deggenaansho rasmi ah magaalo magaalo shisheeye iyada oo loo marayo maalgashi ballaaran oo waddanka martida loo yahay.
Raaxo iyo nadaafad
Vienna waxay ku jirtaa kaalinta 32aad ee tobanka ugu sareeya, waxaana loo arkaa mid ka mid ah kuwa ugu badan meelaha ugu fiican ee lagu noolaado maahan fursad. Tani waa magaalo qurux badan oo qurux badan lehna weji taariikhi ah, dhaqaale horumaray, dhismayaal dhismeedyo iyo dhaqan. Kaabayaasha horumarsan ee magaalada, meel muhiim ah ayaa loo qoondeeyay aagagga madadaalada cagaaran, jardiinooyinka, guryaha kafeega. Dadka degan Vienna waa taageerayaasha gaadiidka dadweynaha, sidaa darteed wax badan kuma dhaqaaqaan gawaarida gaarka loo leeyahay, taas oo ilaalinaysa nadaafadda waddooyinka iyo hawo nadiif ah inta badan. Vienna waxaa la aqoonsan yahay sanadka 2021 magaalada ugu fiican ee lagu noolaado xagga cilmiga deegaanka.
Awstaria waxay si ikhtiyaar ah ugu oggolaaneysaa muhaajiriinta inay si joogto ah ula dagaan go'aanka maaliyadeed ee dambe. Intaa waxaa dheer, maalgelinta raasumaalka looma baahna, laakiin codsadayaasha deggenaanshaha ama muwaadinnimada waxaa looga baahan yahay inay bixiyaan caddeyn ku saabsan awooddooda dhaqaale. Shuruudaani waxay ku saleysan tahay shuruud kale: inaad wadanka joogto ugu yaraan 6 bilood sanadkii.
Heerka iyo tayada nolosha
Zurich waa xarunta dhaqaalaha iyo magaalada ugu weyn Switzerland (inkasta oo ay yar yihiin dadka ku nool - 428 oo qof) waxay ku jirtaa 000th ee 36ka ugu sarreysa. Sida laga soo xigtay muhaajiriin badan magaalada ugu fiican adduunka xaga daryeelka iyo barwaaqada. Zurich waa mid jilicsan, si wanaagsan loo xardhay, bourgeois caqli badan oo ganacsi u eg, Zurich wuxuu soo jiitaa boorsooyinka meerayaasha oo dhan. Sidoo kale u wanaagsan nolosha iyo ganacsiga labadaba. Tirada dadka muwaadiniinta ah ee bilaa shaqada ah waxay marayaan 9aad. Magaaladu waxay ku jirtaa tobanka ugu sarreeya ee Global 500.
Switzerland waxay ku martiqaadtaa muhaajiriinta hodanka ah iyo kuwa madaxbanaan deganaansho rasmi ah, laakiin waxay ku xiran tahay bixinta sanadle wadar ahaan canshuur dhan 450000 oo faran. Si aad u hesho ogolaanshiyaha joogitaanka, waa inaad ku nooshahay magaalada Zurich ugu yaraan 200 maalmood sanadkii - tani waa shardi looga baahan yahay masuuliyiinta Switzerland.
Dad badan dalka ugu fiican loogu noolaado iyo ganacsi sameynta waa Mareykanka Mareykanka. Sida laga soo xigtay Startup Genome, New York, San Francisco iyo London ayaa lagu daray liiska magaalooyinka ugu ixtiraamka badan abuurista bilowga.
Wadnaha Mareykanka ayaa si adag ugu jira kaalinta labaad ee liiska kuwa ugu badan, kaliya maahan dhacdooyinka dhaqameed iyo xarumaha, laakiin sidoo kale marka la eego shaqo raadinta iyo hirgelinta dhammaan noocyada fikradaha ganacsiga. New York waxay ku jirtaa kaalinta afaraad marka la eego tirada Xafiisyada Caalamka.
San Francisco waxay sameysay liiskan iyadoo ay ugu wacan tahay joogitaanka gobol dhan oo ka mid ah ururada tikniyoolajiyadda - Silicon Valley. Magaaladan weyn waxay hoy u tahay dad badan oo caqli badan oo leh aqoon jaamacadeed, boqolkiiba ajaanibta iyaga ka mid ahna wey ka weyn yihiin. Magaaladee ku habboon in lagu noolaado - New York ama San Francisco - qof kastaa isaga ayaa go’aamiya naftiisa, laakiin shuruudaha shirkadda socdaalka Mareykanka waa isku mid qof walba.
Si aad xaq ugu yeelatid inaad ku noolaatid Ameerika, soogalootiga waa inay helaan fiisooyin: EB5 (oo ay ku jirto maalgashi dhan $ 900000) ama E2 ($ 100000). EB5 waxay qaadataa maalgashi dadban, taas oo aan loo baahnayn in laga qaybqaato shaqada shirkadda. E2 macnaheedu waa in ganacsi laga furo Mareykanka. Kaliya ikhtiyaarka koowaad ayaa heli kara Ruushka, taas oo aan aad ugu habboonayn oo faa'iido u leh dad badan sababta oo ah waxay sugi doonaan 2 sano oo kale. Intaas waxaa sii dheer, qaddarku waa mid aad u ballaaran. Laakiin waxaad u mari kartaa wadada kale: marka hore hel dhalashada Grenada (oo ah wadan heshiis lagala saxiixday Mareykanka), halka lagu bixinayo $ 15000 baasaboor. Ka dib markaa, dalbo fiiso Mareykan ah E2. Si deg deg ah looga codsado dhalashada Grenada iyo E2 Mareykanka, waxay maalgashadaan 250000%.
London waxay qabsatay booska hogaaminta marka loo eego heerarka nolosha shaxda adduunka ee milyan-lagu daray magaalooyin dhowr sano. Dakhliga badan ee dadweynaha, jiritaanka kaabayaal horumarsan: taallo dhismeyaal, matxafyada ugu fiican adduunka, jaamacadaha, iwm ayaa ka caawiya inuu isagu noqdo kan ugu horreeya. Boqortooyada Midowday (UK) waxay soosaartaa rukhsad - Fiiso maalgashi oo seddex sano ah dhammaan ajaanibta hodanka ah ee doonaya inay maalgashadaan in kabadan 2 milyan oo sterter ah horumarka gobolka kuhadlaya Ingiriiska. Muhaajiriinta hodanka ah, ka dib kabista UK, way ku noolaan karaan, ka shaqeyn karaan waxna ka baran karaan.
Magaalada ugu fiican adduunka Lisbon si sax ah ayaa loo tixgelin karaa inay tahay meel dalxiis loo tago. Waa magaalada ugu da'da weyn uguna weyn adduunka, Galbeedka Yurub iyo dekedda weyn ee Boortaqiiska. Cimiladeeda wanaagsan ee Mediterranean awgeed, Lisbon waxay leedahay jiilaalkii ugu diiranaa ee Yurub iyo maalmo badan oo qorrax leh sanadkiiba. Waa magaalo dalxiis oo ammaan ah oo ay ku nool yihiin in ka badan 500 kun oo qof. Boortaqiiska - dalka ugu fiican ee lagu noolaado loogu talagalay kuwa jecel cimilada diiran iyo biyo haynta: Badweynta Atlaantik waxay ku taal meel u dhow. Sannadkii 2020, waddanka koonfurta waxaa loo qoondeeyey lambarkii ugu horreeyey ee safarka Yurub.
Cosmopolitans waxay helayaan ogolaanshiyaha joogitaanka ee Portugal sidoo kale iyagoo kaashanaya maalgashi: ugu yaraan 250000 euro. Ficil caan ah oo ka mid ah kuwa doonaya inay degaan deganaansho rasmi ah waa iibsashada guryaha: guri ama aqal 900000 euro ah.
Qiimeynta cunnooyinka ugu macaan magaalada, London ayaa had iyo jeer lagu kala horreeyaa, iyadoo leh in ka badan 70 maqaayadood oo caan ah oo Michelin caan ah. Xarumaha wax lagu karsado ee London waxay siisaa martidooda iyo dadka deggaba suxuunta asalka ah iyo kuwa fiican ee hilibka, kalluunka, khudradda. Caasimadii Ingriiska wali waa sii jirtaa magaalada ugu fiican ee lagu noolaado iyo hab dhaqan iyo cunto karin.
Xarun gastronomic ah sida Tokyo (5aad liiska Resonanse) lama indha tiri karo. 230 maqaaxiyo ayaa ah xiddigaha Michelin. Dhowr boqol oo suxuun oo kala duwan oo macaan oo u badan waxyaabaha dabiiciga ah ayaa ka yaabsada dalxiisayaasha asalkooda iyo dhadhankooda gaarka ah. Chahan, imoni, wagashi, sushi - samee gourmets jacayl iyo joogitaanka magaalo Japan ah si ay awood ugu yeeshaan inay inta badan ku raaxaystaan ​​cunnada Japan.
Aad ayey u adag tahay inaad hesho ogolaanshiyaha joogitaanka ee Japan, maadaama ay tahay dal yar oo xiran oo ay ku nool yihiin dad aad u fara badan. Waxaad ku heli kartaa baasaboorka Jabbaan shuruudaha soo socda:
guur sharci ah oo lala yeesho muwaadin / muwaadin Japanese ah;
deganaanshaha ugu yaraan 5 sano ee aagga gobolka (waa shuruud looga baahan yahay dhammaan codsadayaasha).
amarka wanaagsan ee kuhadalka iyo qoraalka Jabaaniiska;
ka qabashada waxqabadyada rasmiga ah Japan, iyada oo ku xiran xirfadda sare ee shaqaalaha;
codsaduhu waa inuu haystaa ugu yaraan $ 25000.
Waad ka dhaadhicin kartaa masuuliinta Jabbaan inay soo saaraan sharci degenaansho hadaad maal gashato $ 50000 oo kuyaala Magaalada Caasimada u ah Cadceedu. Si tan loo sameeyo, waxay furaan meherad u gaar ah, oo ay si joogto ah u taageeraan una horumariyaan, iyagoo shaqooyin siiya dadka magaalada. Isla mar ahaantaana, mugga maalgashiga waa in si joogto ah loo kordhiyaa.
Tokyo waxay noqon doontaa magaalada ugu fiican adduunka deggenaanshaha joogtada ah, haddii aad u hoggaansanto dhammaan shuruudaha, ixtiraam waddanka iyo caadooyinkiisa oo aad wax ku biiriso dhaqaalaheeda.
Iibsashada dhisme ma guurtada ahi waa mid faa'iido u leh meelahaas meeye meesha ugufiican ee lagu noolaado, tusaale ahaan - Barcelona. Waa magaalo Isbaanish ah oo ku taal xeebta Mediterranean iyada oo leh warshad horumarsan iyo ganacsi, iyo barta muhiimka u ah marinka dalxiiska. Meeshan quruxda badan sanad kasta kahor aafada waxay soo jiidatay kumanaan dalxiisayaal ah, intii lagu guda jiray faafida waxaa loo xiray marin, taas oo aan saameyn xun ku yeelan karin dhaqaalaha Boortaqiiska, iyo gaar ahaan suuqa guryaha. Hadda waxaa suurtagal ah in laga iibsado guryo ku yaal Spain qiimo dhimis 30% ah, qiimaha mitirkiiba laba jibbaarana dhammaadka sannadka 2020 wuxuu gaarayaa 1391 euro. Marka dalxiisayaashu ku laabtaan Barcelona, ​​qiimaha ayaa kor u kici doona. Kuwa maalgashiga ku sameeya guryaha xilligan xaadirka ah waxay dakhli ka heli karaan kirada ama iibka ka dib marka xuduudaha la furo.
Barcelona sidoo kale waxay leedahay barnaamij maalgashi oo loogu talagalay cosmopolitans: tabarucaada dhaqaalaha magaalada ayaa gaaraya 500000 euro.
Mid ka mid ah meelaha ugu fiican ee lagu noolaado mustaqbalka wuxuu noqon karaa Athens. Waxay ku jiraan booska 29aad liiska megacooyinka waxtarka leh. Caasimadda Giriiggu waa xarun dhaqan, taariikhi iyo dhaqaale oo leh xaalado cimilo oo aad u wanaagsan nolosha. Qiimaha ku noolaanshaha ayaa aad uga hooseeya marka loo eego magaalooyinka kale ee la qiimeeyo, kuwaas oo aan ka farxin karin laakiin dalxiisayaasha. Awoodda caasimadda Giriigga ayaa sii kordheysa sanad kasta, maadaama dowladdeeda ay si dhab ah ugu howlan tahay dib-u-habeyn dhaqaale, oo ay ugu weyn tahay la-dagaallanka musuqmaasuqa.
Kuwa doonaya inay yimaadaan Athens si ay ugu noolaadaan waa inay ku maalgashadaan 250000 euro.
Magaaladee ku habboon in lagu noolaado - qofka laftiisa ayaa go'aansada. Way dhacdaa in booqashada magaalo weyn, dalxiis ku jeclaado aad u badan oo uu ku riyoodo dhaqdhaqaaq hore. Waa macquul in la hirgaliyo qorshayaasheena, laakiin waa inaan xasuusnaano in dib udejinta dal kale aysan ku dhicin laqabsasho iyo walbahaar la'aan, waana wax aan macquul aheyn hadaan tabaruc dhaqaale la helin.
La-taliye AAAA ayaa kaa caawin doona inaad ka mid noqoto ka qaybqaatayaasha mashaariicda maalgashiga ee dalalka daneynaya inay helaan dadka dhaqaalaha u madaxbannaan AAAA ADVISER waa wakiil shati u leh barnaamijyada muwaadinimada rasmiga ah ee ku saleysan maalgashiga muhaajiriinta. Halkaan waxaad ka heli doontaa caawimaad iyo talobixin khabiir ah oo ku saabsan dhammaan arrimaha ku saabsan helitaanka oggolaanshaha joogitaanka ama Dhalashada Jinsiyadda.
↑ meesha ugu fiican ee lagu noolaado ↑ wadamada ugu fiican ee lagu noolaado ↑ wadankee wanaagsan in lagu noolaado ↑ magaalokee fiican in lagu noolaado ↑ dalka ugu fiican adduunka ↑ magaalada ugu fiican adduunka ↑ dalka ugu fiican ee lagu noolaado ↑ magaalada ugu fiican ee lagu noolaado ↑ meeye meesha ugufiican ee lagu noolaado ↑ wadanka aad dagantahay ↑ magaalo lagu noolaado ↑ dalka ogolaanshaha joogitaanka ↑ wadan joogto ah ↑ deganaansho rasmi ah ↑ dalka ka bax ↑